နေ၀သန်7 March 2012 09:03အင်း.. လောကမှာ ရှင်သန်ကျင်လည်ဖို့ တတ်မြောက်သင့်တဲ့အရာတွေကို တတ်မြောက်သင့်ပါတယ်လေ... ခင်မင်လျက်နေ၀သန်ReplyDeleteမဒမ်ကိုး7 March 2012 09:10အင်း နောင်မှတတဲ့နောင်တပေါ့ ကိုညီရဲရေး)))ReplyDelete8Yar7 March 2012 09:26ဟုတ်တယ်ဗျာ ကလေးအရွယ် ပညာသင်ချိန်မှာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ် ရှိသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုညီရဲရေ။ReplyDeleteချစ်စံအိမ်7 March 2012 09:53လမင်းညီမလေးလိုပေါ့ ဥာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီမကြိုးစားလို့ ၁၀တန်ကျပါလေရောအဲတော့မှာမျက်လုံးပြူးပြီကြိုးစားတော့တာလမင်းကတော့ညံ့လို့ မပြောတော့ဘူး:DReplyDeletesan htun7 March 2012 12:34အိမ်က မောင်မောင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ..အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ဖို့ ကို ပတ်ပြေးနေတာ..တနေ့ တော့ သိလိမ့်မယ်..ReplyDeleteအင်ကြင်းသန့်7 March 2012 13:51တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စာက ကြောက်စရာမကောင်းဘူး ကိုကြီးရဲရဲရ....စိတ်ဝင်စားစရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ကျောင်းကသင်ပေးရုံနဲ့လည်း ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့ရာ မလုံလောက်ဘူး.....ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လိုလိုချင်ချင်နဲ့အပြင်မှာ ဆက်လက်ဆည်းပူးရသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရာမှာ အသက်ကြီးသွားပြီတို့ နောက်ကျသွားပြီတို့ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ကျနော်တော့ထင်တယ်။ တကယ်တမ်းသာ တတ်ချင်စိတ်နဲ့လေ့လာသင်ယူလိုက်ရင် တခဏနဲ့ တတ်လွယ် သိလွယ် ကျွမ်းကျင်လွယ်လွန်းတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုပါ။ ဥာဏ်ကောင်းပြီးသားလူဆို ပိုတောင်လွယ်ဦးမှာ။ :)ReplyDeletejasmine(တောင်ကြီး)7 March 2012 17:13ဂျက်လဲ စာကျက်ရတာအရမ်းပြင်းတယ်ကျက်ရင်လဲချက်ချင်းရတယ်အရှိန်ယူရတာကြာတာလေအင်္ဂလိပ်စာမကြောက်ဘူးတစ်ကယ်ကြောက်တာမြန်မာ့သမိုင်းတို့မြန်မာစာတို့ပဲခွဲလိုက်တော့0k သွားတယ်လေညီရဲရေ နောက်လဲ ပဲတာမျိုးလေးတွေရေးနော်ခင်တဲ့ sis jasmineReplyDeleteမိုးငွေ့......7 March 2012 22:01အင်္ဂစာက စာအုပ်လေးတွေများများဖတ်ပေးရင်ပိုကောင်းတယ် အလွတ်ကျက်လို့ရတဲ့စာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ...။ReplyDeleteSHWE ZIN U7 March 2012 22:59ကိုညီရဲသစ် ရေဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ကောင်လေး အကြောင်းဟာ လူငယ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ စာလေးပါReplyDeletesosegado7 March 2012 23:13စာသင်ကြားပုံစံ စနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်၊ စာမေးပွဲဖြင့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ပါပဲ၊ အောင်အောင် အမှတ်များအောင်ဖြေတတ်သူတွေက ထိပ်ဆုံးရောက်၊ တတ်သလားသိသလား မသိနိုင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ စာမေးပွဲ ပညာရေးစနစ်ကနေ လမ်းခွဲထွက်ပြီး တတ်အောင်တော်အောင် လူသားဆန်သော ပညာရေးကို သွားနေပါပြီ စနစ်ပေါ်မှာ မှုတည်ပါတယ်။ReplyDeleteဟန်ကြည်7 March 2012 23:23ဒီပို့စ်လေး ကြိုက်တယ်...ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပညာရေးလောကသားဖြစ်နေတော့ ပိုပြီးတွေးစရာ ဖြစ်သွားတယ်...သတိရရင် ပြန်ဖတ်ရအောင် မှတ်စုထဲမှာ ကော်ပီယူထားလိုက်ပါတယ်...ကျေးဇူးပါ...ReplyDeleteချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)8 March 2012 00:21လူငယ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ ပိုစ့်လေးဘဲ ညီရဲရေအင်္ဂလိပ်စာကို ကြောက်စရာလို့ ထင်နေသူတွေ မှတ်သားစရာပါ. ခုခေတ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာက အရေးပါလာပြီဆိုတော့ မသင်မဖြစ် သင်ယူရတော့မဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ဝင်တစား သင်ယူရမှာပေါ့လေReplyDeleteပစ်ပစ်8 March 2012 01:29ဟုတ်တယ် Black ရေတခါတလေမှာ.ညဏ်ကောင်းတိုင်းလည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေ..လူငယ်တိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ post လေးပါ..ကျမဘလော့မေ၇းဖြစ်လောက်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့အရမ်းလည်းစိတ်ညစ်နေတယ်..နောင်တချိန်အဆင်ပြေရင်တော့ စာတွေပြန်ရေးချင်ပါသေးတယ်..ကျမအားလုံးကိုသတိရပါတယ်..ခင်တဲ့ ပစ်ပစ်ReplyDeletemstint8 March 2012 15:30ပင်ကိုယ်ဥာဏ်ကောင်းပေမယ့်အုပ်ထိန်းသူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအနာဂါတ်ဘဝဟာပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။စောစောစီးစီးကသာဒီကလေးကို ပဲ့ပြင်သွန်သင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလေးရဲ့ဘဝတက်လမ်းလည်းဖြောင့်ဖြူးခဲ့မှာအမှန်ပါ။ကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေ။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်ReplyDeleteပျိုးယုဝသုန်8 March 2012 21:16ခက်စလားဆိုတော့ တကယ်မခက်ပါဘူးး..ဒါပေမယ့်လွယ်တဲ့အထဲတော့မပါဘူးး..ဖတ်တာများသွားရင်အသုံးအနှုံးတွေရဲ့သဘောတွေကိုသိလာမှာပါ.. အဲ.. ပျင်းရင်တော့ အင်္ဂလိပ်ကားတွေကိုစာတန်းထိုးပြီးသာကြည့်... စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလိုအသံတွေကိုပါရတယ်... ပျင်းလည်းမပျင်းဘူး.. တချက်ခုတ်ရင် ၄ချက်လောက်ပြတ်တယ်..ကဲ ..မကောင်းဘူးလားညီရဲရေ..ခင်တဲ့အမဝသုန်ReplyDeleteYin Sue8 March 2012 23:01ပင်ကိုယ်ညဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေ အဲလိုဖြစ်တာများကြတယ်ဗျ...ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတော်တော်များများလည်း အဲလိုဖြစ်ကြတယ်......ဘာပဲပြောပြော လူငယ်တွေအတွက်တော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့စာလေးပါ....ReplyDeleteကိုဇော်9 March 2012 02:16ကျနော့်ကို ပြောနေတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား။ReplyDeleteမောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ)9 March 2012 09:05ဟုတ်တယ် ငယ်ငယ်အလေ့ကျင့်နဲ့ ကြိုးစားမှုနည်းတော့ကျွန်တော်လည်း ခနော်ခနဲ့ အသံထွက်တွေနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတယ်ReplyDeleteလွင်ပြင်လှိုင်းငယ်10 March 2012 14:26တန်ဖိုးရှိလိုက်တဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးပါပဲReplyDelete...အလင်းစက်များ14 March 2012 22:27ပညာရေးမြှင့်တင်ဖို့သမ္မတကြီးကြိုးစားနေပါပြီဗျာ။ စိတ်ချပါ။ နောင်ကလေးတွေ ဘွတ်ဘတ်ရွှတ်ရှက် နိုင်တော့မှာပါ။ :DReplyDeleteAdd commentLoad more...
ငါးကိုများသောအားဖြင့် အညှီနံ့ကြောက်ပြီး ကြော်ပြီးမှ ချက်စားလေ့ရှိတယ်... ။ ခုတစ်ခါကတော့ ၀ယ်လာတဲ့ငါးကြင်းသားလတ်တယ်.. ရောင်းတဲ့အစ်မက သေချာဒိုက်စော်မနံ့တာက...
ရခိုင်မုန့်တီ ???? ရခိုင်မုန့်တီ ???? အိပ်နေရင်းနဲ့တောင် ထယောင်သလား၊ လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တောင် ရေရွတ်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကတည်း ဘယ်...
Number of View: 293 စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာနှင်ကျွန်မ ဆုံဆည်းမှုက စာပေကိစ္စရပ်များမှ စတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဆရာ့၏အမေရိကန်စကားပြောသင်တန်းတွ...
အဖေ့ရဲ့လက်ဆောင် HAPPY FATHER'S DAY
ပြေးလွားကာဒီစားကျက် သွက်သွက်ကလေးပြေး ဘေးနားမှာသားငယ်သမင် ပတ်ဝန်းကျင် ကျားရဲဘေး ကာကွယ်ပေးတာ မိဘမေတ္တာပေါ့။ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သားရဲယုတ်အန္တာယ်ကို အမျိုးမျိုးကာ...
- မိသားတစ်စု ခေါင်မဲ့သွားတာ
အချစ်ခံရခြင်းမှာ ရူးသွပ်မှုက သာသာယာယာ ရှိတတ်တယ်...အဓိပ္ဗါယ်မဲ့ တွေးတောခြင်းတွေနဲ့ ကြီးစိုးအတည်တကျ မရှိတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့အသားတောင် ကျနေပြီ။ချစ်ခြင်းတစ်ခ...
ငါးမျှားဝါသနာပါသူတွေ၊ ငါးမျှားဖို့တက်ကြွနေသူတွေ မြင်ရတိုင်း ငါးမျှားခြင်းကို ဘာလို့ နှစ်သက်ကြပါလိမ့်ဟု တွေးမိသည်။ ငါးမျှားတံနှင့် ယောက်ျားလေးကို တွ...
14 June 2013 ဧပြီ ၁၆ ရက်က စင်ကာပူမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ MAI လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် လိုက်ပါလာသည့် ကချင်အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးသည် လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပြီးချိန်တ...
အနီးကပ်ကြည့်လိုက ပုံကို ကလစ်ပါ
ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုက အားလုံးအတွက် တန်းတူညီမျှပါပဲ။
စာနာတတ်သူရင်ကို အတ္တက ဆောင့်ကန်ခံရတဲ့ မြို...
သည်အတွေး၊သည်အိမ်မက်မှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလိုလို၏အတွေးအိပ်မက်တစ်ခု ဖြစ်နေ
တစ်နေ့လုပ်ခ ကျပ်ငွေ ၃၀၀၀ ရဖို့ အရေး ခုထိ အော်ဟစ်နေရတုန်းပါ။ မီဒီယာတွေ ပွင့်လင်းခွင့် ရလာတယ်၊ သတင်းနဲ့အချက်အလက်တွေ သုံးစွဲခွင့်တွေ ရလာကြတယ် ဆိုကြပေမယ့် ...
အဲဒီကစ - ရသမျှထဲမှာ
Blog မှာ Post မတင်ဖြစ်တာလည်း ကြာပါပြီ ... ။ စာရေးချင်စိတ်တွေ
ပျောက်ဆုံးနေတာလည်း ကြာခဲ့ပြီ ... ။ တခါတလေ မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး အားနာပါးနာ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချ...
တစ်စစီ တစ်လွှာစီ ပြိုကျလာနေတဲ့ အုတ်ခဲစတွေလို....
တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်.....ထမင်းမစားရဘဲနေရတာ ဒီတစ်ခါအကြာဆုံးဘဲ.... ထမင်းမစားရတာ ၅ရက်ကျော်လေးပေမဲ့ တော်တော်ကြာသလိုကိုခံစားရတယ်...... ဆေးရုံတက်နေတော့ သူငယ်ချင်...
ခဏခဏ မာန်ဖီပြနေတဲ့ ပင်လယ်ဟာ
အငွေ့ပျံလွယ်ကြောင်းကို သူတို့ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ကြဘူး။။ မျှားဦးရဲ့လားရာကို ဂရုထားရလွန်းတော့
မဟာမှိုင်းပွဲမှာ ကဗျာရွတ်တော့ ပန်ဒိုရာက ကိုဝင်းမြင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး မိသားစုတဲ့။ အဲဒါ အရင်က မိသားစု ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျွ...
"" အိမ်လွမ်းစိတ် ""
နှစ်ချို့ ခဲ့ပြီး။ အမေ........
ယုဇနပန်းရနံ့ တွေက လတ်ဆတ်လို့ 
တိုက်နေကြတဲ့ စစ်တွေ ...။
ထားရှိနေတဲ့ အမုန်းတရားတွေ ...။
လွဲမှားနေတဲ့ နားလည်မှုတွေ ...။
ကံကြမ္မာရဲ့ အဘိဓာန်ကို တရွက်ခြင်း
စာရွက်သာ ကုန်သွားတယ် အဆုံးသတ်မှာ အဆုံးအဖြတ်က မသေချာတော့ သီအိုရီ အမှားနဲ့...
* **ဒီမှာ “ ဟေ့ လူ”*
* ခင်ဗျားလည်း မြန်မာ ကျွန်တော်လည်းမြန်မာ*
" သူ့ အလှ"
ရနံ့ပန်းက တလှိုင်လှိုင်... ခေတ်စတိုင်လ် ဟန်ကျကျ...
စံပြအလှ သူ့မူရာ... သူ့အထာြ...
တကယ် ဆို အဲ့ဒီနေ့ က ရာသီဥတုကလည်း သာယာမနေဘူး မိုးအုံ့နေတယ် မိုးရွာရင်တော့ ကောင်းသား အခု ဟာက မကြည်မလင် နဲ့ အုံ့ဆိုင်းနေတာ ...... တခါတလေ တော့လည်း ဖြစ်တက်...
ရွှေဒေါင်းတောင်အွန်လိုင်းဂျာနယ် အား ပြုပြင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ခေတ္တခဏ ပိတ်ပင်ထားမည်ဖြစ်
ရွှေဒေါင်းတောင် အွန်လိုင်း ဂျာနယ်ကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ထုတ်လွင့်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ပြည့်ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
“From the Cradle to the Grave” ဆိုတဲ့ အီဒီယမ်လေးကို ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က ဖတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်စာအုပ်လေးကို လှန်လှောကြည့်မိတော့ Cradle ဆိုတာ...
_/\__ ရခိုင်မြေ အေးချမ်းလုံခြုံမှုရပါစေ _/\__
အလုပ်ထဲ အခန့် မသင့် တော့ လဲ ရုတ်တရက် ခါးတစ်ခုလုံး လှုပ်ရှားလို့ မရအောင် နာကျင်ကိုက်ခဲလာ၍
အလုပ်မှ သုံးရက်ခန့်အနားယူရတော့ သည်။ တရုတ်ဆေးပူများဖျန်းပြီး ဆေးပလာ...
Guitar Pro 6.1.1 r10791 x86 + Soundbanks
မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီရက်ပိုင်း စာရေး၊ ပို့စ်တင်တာ နည်းနည်း ကျဲပါမယ်နော်။ လုပ်စရာလေးတွေနဲ့ မအားလပ်လို့ပါ။ အသက်လေးကလည်း ရလာတော့ Blog,...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ဟာ
၁၉၁၅ ရှေ့နေ ဦးဖာသား။
ဘီလူးတစ်ကောင်ရဲ့ ကကြိုး ကောင်းကင်ပြာကိုနောက်ခံထားပြီး …. တိမ်လွှာဖြူဖြူတွေက မသိမသာ လွင့် ပါးနေကြတယ်….သိပ်မကြာခင်အချိန်က ဒီကောင်းကင် ပြာကြီးကို သူမေြာ့...
အခုတလောနားထောင်ဖြစ်နေတဲ့သီချင်းလေးပါ အရမ်းကြိုက်တယ် ချစ်သူလေးနားဆင်ဖို့ ပါ
ဟိုးးး မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအဆုံးအထိလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါချစ်သူရေ။ နွေရာသီိမို့ ကောင်းကင်ကြီးက အရမ်းလှနေတယ်လေ။ ချစ်သူ့အပြင် ကျွန်မ အချစ်ရဆုံးက ကောင်းကင်ကြီးေ...
သည်ရွာကလေးကို လူတွေက လက်ပဒေါ လို့ပဲခေါ်တယ်။ တကယ်စာနဲ့ပေနဲ့ ရေးရင်တော့ လက်ပံတော ဖြစ်ရမှာပေါ့လေ။ ဖိတ်စာတွေဘာတွေမှာ လက်ပံတော ရွာနေ အဘဦးဖိုးဂေါင်ကို အမှူး...
လူမလေးကိုမှ စွဲလန်းမိတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်
တိုးဝင်ဆဲ လေထုမှာ သွေးနံ့က တစ်ချက်တစ်ချက် ပါတယ်..
ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ သိသိနေတဲ့ သိစိတ...
အလုပ်ပိတ်ရက် တစ်ရက်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးများ စုရပ်ဖြစ်သည့် City Hall တွင် အသိတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ ခဲ့သည်။ ထိုသူ့ ကို ဒီစင်ကာပူန...
အလုပ်နားရက် တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်တွင် ပျင်းပျင်း ရှိသဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ရွှေမြန်မာတို့ ဆုံဆည်းရာ ပင်နီဆူလာ ပလာဇာသို့ တစ်ခေါက် ရောက်လာခဲ့၏။ ဟို...